Phinda uthole idokhumenti ye-Word kusuka ku-Temporary Amafayela
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Word Repair Phinda uthole idokhumenti ye-Word kusuka ku-Temporary Amafayela
Ukusebenzisa DataNumen Word Repair Ukubuyisa idokhumenti ye-Word kusuka ku-Temporary Amafayela
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,495)
Lapho umbhalo wakho we-Word (*. DOC noma * .DOCX file) usonakele noma ukhohlakele ngenxa yezizathu ezahlukahlukene futhi awukwazi ukuthola imininingwane oyifunayo kuwo. Ngemuva kwalokho njengoba iMicrosoft Word izokwakha i-temporary lapho ucubungula idokhumenti, kusenokwenzeka ukubuyisa idatha kusuka ku-Word temporary, ngama DataNumen Word Repair.
IMicrosoft Knowledgebase ichaza ifayela le- imininingwane eningiliziwe mayelana nethempelirary izowakha lapho icubungula idokhumenti. Ngakho-ke lapho kwenzeka inhlekelele yedatha, ungalandela imininingwane ukuthola ithempelirary angaqukatha idatha ewusizo, bese usebenzisa DataNumen Word Repair ukuskena nokuthola idatha kusuka kulawa mafayela.
Okwamanje DataNumen Word Repair isekela ukululama kuthempeli le-.wbkrary namafayela .asd AutoRecovery londoloza amafayela.
Okwe .wbk temporary, imininingwane eningiliziwe ingatholakala ku- lapha. Imvamisa izogcinwa enkombeni elandelayo:
C: Imibhalo Nezilungiselelo Idatha Yohlelo LokusebenzaMicrosoftWord (YeWindows XP)
C: Abasebenzisi I-AppDataRi-oamingMicrosoftWord (YeWindows 7)
Okwe-tempo ye-asdrary, imininingwane eningiliziwe ingatholakala ku- lapha. Imvamisa izogcinwa enkombeni elandelayo:
Ukuze wenze ukutakula, sicela ulandele izinyathelo ezingezansi:
Qaphela: Ngaphambi kokubuyisa i-temporary IZwi lefayela nge DataNumen Word Repair, sicela uvale iMicrosoft Word kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezingafinyelela kuthempelirary ifayela.
Khetha ithempeli elonakele noma elonakelerary IZwi .tmp noma .asd ifayela lizolungiswa.
Ungafaka i-temporary iZwi .wbk noma igama lefayela le-.asd ngqo noma chofoza inkinobho futhi khetha Wonke Amafayela (*.) njengohlobo lwefayela ukupheqa bese ukhetha ifayela.
Ngephutha, DataNumen Word Repair izogcina ifayili leZwi elihleliwe njenge-xxxx_fixed.doc, lapho i-xxxx igama lomthombo wegama elithi .doc file. Isibonelo, nge-tempo yomthomborary Igama lefayela ngu ~ wrf0000.wbk, bese igama elizenzakalelayo lefayela elihleliwe lizoba ngu ~ wrf0000_fixed.doc. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen Word Repair intando starukuskena nokulungisa i-tempo yomthomborary Ifayela leZwi. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo yokulungisa, uma umthombo wethempelirary Ifayela leZwi lingalungiswa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo kanjena:
Manje usungavula ifayela le-Word elinqunyelwe nge-Microsoft Word noma ezinye izinhlelo zokusebenza ezihambisanayo.
Qaphela: Uhlobo lwedemo luzobonisa ibhokisi lomlayezo elilandelayo ukukhombisa impumelelo yokutakula:
futhi ungavula ifayela elilungisiwe ukuze ubone idokhumende ebuyisiwe. Ngokwedokodo elitholakele, ungazi ukuthi ngabe DataNumen Word Repair Ungalulama ithempeli lakhorary IZwi lefayela ngempumelelo futhi uthole okufunayo. Noma kunjalo, inguqulo yedemo ngeke ilondoloze ifayela le-Word elihleliwe. Ngiyacela oda okufushane umnyuziki ukuthola ifayela.